कतारमा एनआरएन कपका दश खेल सम्पन्न, बाँकी खेल सेप्टेम्बर ४ र ५ मा
खगेन्द्र कार्की कतार । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारले पाँच लाख रुपैयाँ बढी राशिको ‘एनआरएनकप फुटबल २०१४’ का खेलहरु अल अरबी स्पोर्टस् क्लबको खेल मैदानमा सम्पन्न भएका छन् । प्रवासमा रहेका खेल...
टेक्ससमा महको धमाका, मिलन र शान्तिको दोहोरी घन्किने
विकासराज न्यौपाने अमेरिका । थुप्रै नेपालीहरुको बसोबास रहेको अमेरिकाको टेक्ससको ड्यालासमा यसपालिको दशैँ निकै भव्य हुने भएको छ । दशैँ छेकमा एक हप्ता मै दुई वटा भव्य कार्यक्रमको आयोजनाले सबै नेपालीहरू दङ्ग दंग भएका...
धादिङ- नुवाकोट समाज युके जुर्मुराउँदै
युके । धादिङ र नुवाकोटबाट बेलायत आई बसोबास गरिरहेकाहरुको साझा संस्था धादिङ नुवाकोट समाज यूकेको नव निर्वाचित कार्य समितिको प्रथम बैठक सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष बम ब्लदेनको अध्यक्षता तथा सचिब धन गुरुङको संचालनमा...
नेपालका सरकारी संचारगृह राजनीतिक भर्तीकेन्द्रः नेपाल
त्रिलोचन कोइराला युएई, १८ भदौ । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले नेपालको सरकारी संचारगृह राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई शाखाको आयोजनामा दुबईको धोव प्यालेसमा आयोजित ‘वरिष्ठ पत्रकार...
युएईमा कलाकारको बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न
गीतामणि पाण्डे युएई दुबई । लोक दोहोरी छेत्रका चर्चित गायक राजु ढकाल र गायिका देवी घर्ति मगरलार्इ स्याङ्जा सहयोग समाज युएईले दुबईबाट बिदाई गरेको छ । नेपाली महिलाहरुको चाड हरितालिका तीजको अबसर पारेर प्रस्तुति...
कतारमा चेतनामुलक ३ लघु चलचित्र प्रदर्शन
घनश्याम पराजुली (कृष्ण) दोहा । आरम्भ नाट्य डबलीको प्रस्तुतीमा दोहास्थित टप र्फम रेष्टुरेन्टमा एक कार्यक्रमबीच तीन ओटा जनचेतना मुलक लघू चलचित्रको प्रदर्शन गरिएको छ । कतारका विभिन्न दृश्य समेटिएका चलचित्रहरुमा कतारमा कार्यरत स्थानीय नेपाली...
यूएईको अलऐनवासी प्रवासी नेपालीले धुमधामसंसँग तीज मनाए
उत्तम अधिकारी यूएई । यूएईको अलऐन शहरमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुले मनोरन्जात्मक साँस्कृतिक कार्यक्रम सहित तीज पर्व मनाएका छन् । गत अगस्त २९ का दिन प्रवासी नेपाली मञ्च यूएईको अलऐन क्षेत्रीय समितिको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम...
प्रवासी नेपाली मञ्च कतारको ईलाका अधिवेशन धमाधम सम्पन्न
छविलाल प्यूठानी कतार । प्रवासी नेपाली मञ्च कतारको ईलाका नं. ३ र ईलाका नं. ४ सनैयाको संयुक्त प्रथम ईलाका अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । ‘शसक्त संगठनका लागि संगठन सुदृढीकरण प्रवासी नेपाली मञ्चको अभियान, प्रवासी...
क्वालालम्पुरमा निश्चल परदेशीको एकल गजल वाचन
अर्जुन काफ्ले मलेसिया । साप्ताहिक साहित्य सन्डे अन्तर्रगत आइतबार मलेसियाको क्वालालम्पुरमा गजलकार निश्चल परदेशीको एकल गजल वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भयो । अनाममण्डली मलेसिया र विश्व नेपाली साहित्य महासंघ मलेसियाको संयोजनमा भएको सो एकल वाचन...
चेपाङ संरक्षण केन्द्रलाई आर्थिक संकलन गर्न कतारमा अभियान शुरु
होमनाथ सापकोटा रत्ननगर, १५ भदौं । चितवनको रत्ननगर–१० मा रहेको चेपाङ संरक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि कतारमा आर्थिक सहयोग संकलन अभियान शुरु भएको छ । आर्थिक अभावका कारण केन्द्र सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको समाचार सञ्चारमाध्ययममा...
उद्योग मन्त्री थापा टर्कीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी
काठमाडौँ । उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा टर्कीमा आयोजित इजमिर इन्टरनेशनल फियरमा सहभागी हुनुभएको छ । ८३औं फियरमा सहभागी हुन मन्त्री थापा केही दिनअघि टर्की जानुभएको हो । टर्की सरकारको विज्ञान प्रविधि तथा उद्योग मन्त्रालयको...
एन्मा र नासाको १० औँ संयुक्त सम्मेलन कोलोराडोमा
कोलोराडो, अमेरिका । एशोसिएसन अफ नेप्लीज ईन मिडवेष्ट अमेरिका (एन्मा) र नेप्लीज एशोसिएसन ईन साउथवेष्ट अमेरीका (नासा) को १० औँ संयुक्त सम्मेलन कोलोराडोको डेनवर्क स्थित क्राउन प्लाजा होटलमा चलिरहेको छ । अगष्ट ३१ सम्म...
स्रोत नखुलेको १० लाख नगदसहित पक्राउ
क्वारेन्टिनबाट भागेका ३३ जनामा देखियो कोरोना
सुदूरपश्चिममा एकै दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित, कैलालीमा मात्रै १६५ संक्रमित
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, शनिबार ११ बजे बस्ने
कोरोनाबाट ४९ दिने शिशुको मृत्यु पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो, ४ हजार ३२० निको